Skyscrapers kacha mma na Tokyo | Akụkọ Njem
Ike agwula m Tokyo A njem naanị ịmata obodo, na-ebi ya, na jidere ya. Ọ dị mgbe mmadụ kọwara ya dị ka obodo na-agbasa elu karịa na-agbago elu, ọ bụkwa otú ahụ ka ọ na-adị ma mmadụ lee ya anya site n’ebe dị anya. Nnukwu megalopolis.
Ọ bụghị na ị ga-ahụ ọtụtụ skyscpers ọnụ, ọ bụghị New York n'echiche ahụ, ma ọ nwere ụlọ ndị toro ogologo ma na-adọrọ mmasị na ọtụtụ n'ime ha nwere ebe dị elu. Ka m gwa gị na ịtụgharị uche Tokyo n'ehihie ma ọ bụ n'abalị site na mma dị mma bụ akwụkwọ ozi a na-agaghị echefu echefu, yabụ, lee lọ elu na ụlọ elu ndị ị na-agaghị echefu na Tokyo.
1 Eluigwe Tokyo
2 Orilọ Mori
3 Towerlọ elu Tokyo
Dị ebube. Ebumnuche ahụ na-akọwa ụlọ elu a nke dị nso na mpaghara ọdịnala nke Asakusa. Ọ bụ ụlọ elu nnyefe dị na Sumida district, na nso osimiri ahụ nso. Nwere 634 mita elu na ọ bụ usoro kachasị elu na mba ahụ na nke abụọ kachasị elu na ụwa n'oge e mechara ya.
Ọ nwere oche deeti abụọ ma ha na-enye oke echiche. Torịgo n’ebe kachasị elu dị oke ọnụ mana ọ bara uru. Nweghị ike ịga ebe ahụ ma ghara ịrịgo mita 450. Ha dị otu narị mita karịa ọkwa mbụ na-ahụ ihe na ọ na-eme ọdịiche. Ala dị ala dị mita 350 na ọ bụ Tembo Deck. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ nwere ọkwa atọ na nke ikpeazụ bụ nke nwere windo dị elu, nke kachasị mma.
N’etiti ụlọ ahịa ihe ncheta na Musashi Restaurant ebe ị nwere ike iri nri ndị Japan na French. Na ọkwa mbụ enwere ụlọ oriri na ọeterụ andụ na kọlọtọ plastik siri ike iji hụ site na ala. Ọ bụrụ n ’ị zụrụ tiketi ịga nke elu, ị ga-enwerịrị igwe mbuli ma gbagoo na Tembo Gallery na ụzọ ya dị n’igwe ojii. Ọ bụ ihe kasị mma!
Nwere a gburugburu na-arịgo elu na-agba gburugburu ụlọ elu ahụ midway up ọ na-ebili ma na-enwu gbaa, n'abalị, na ndo nke odo odo, acha anụnụ anụnụ na pink. Nke kachasị mma, ọ dị ka ị nọ na 2001 Space Odyssey. Eziokwu bụ na saịtị ahụ na-akpọ gị òkù ka ị nọrọ ogologo oge, karịchaa ma ọ bụrụ na ị ga-aga n'abalị.
Azụrụ m tiketi abụọ n'ala mbụ, tupu m gbagoo. Ọ na-emepe site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere 8 nke ehihie, anaghị emechi ma tiketi na-efu yen 10 yen maka ụlọ nche mbụ yana 2060 ọzọ maka nke abụọ. Ọ bụrụ n ’ịchebe maka ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, maka nri abalị, ị ga-enwerịrị ya na ntanetị ruo otu ọnwa tupu oge eruo.
Ọfụma a na-akpọ ya Anya Tokyo ma rute na 238 mita elu. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọfịs ọ bụ ezie na ọ nwere ụfọdụ ụlọ ahịa na ụlọ nri, nke a na-ahụkarị na Japan, yana ebe ngosi nka nka ama ama ama Ihe ngosi nka nka Mori.
Ihe kachasị mma nke skyscraper a bụ Eluigwe, nke abụọ nche, n'ihi na ọ bụ n’èzí, dị n'otu ụlọ elu nke ụlọ ahụ, na ebe heliport dị. Cheedị banyere nke ahụ! Enweghị windo ma ọ bụ nchara ikewapụ gị na ikuku Tokyo. Ọ mara oke mma! Nwere ike ịhụ ezigbo ụlọ Tokyo, Yoyogi Park na Tokyo Skytree n'onwe ya ma ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma n'Ugwu Fuji n'onwe ya.
A na-emepe Sky Deck a site na elekere 11 nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke abalị ma na-emeghe mgbe niile site na 8 ruo 10 elekere, ọ bụ ezie na Fraịde, Satọde na ezumike ọ na-emepe otu awa ọzọ. Ntinye aka bụ 11 yen gbakwunyere 1800 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbago elu igwe.
Towerlọ elu Tokyo
Ọ bụ ụlọ elu kachasị elu ma ọ bụrụ na ịnweghị oge, echere m na ọ bụ naanị ya ka ị gaghị eleghara anya n'ihi na ọ gaghị adị elu dị ka ndị ọzọ mana ọ bụ akara ngosi obodo. Ihe kachasị mma ị ga - eme bụ ịrị elu ọdịda anyanwụ n'ihi na mgbe ahụ ọ na - enwu gbaa ma dịka esere ya na - acha odo odo oroma yiri ka ọ na - enwu.
Emeghe na 1958 na mbụ ọ na-eji maka nnyefe nke ọha yinye NHK ọ bụ ezie na mgbe e mesịrị na nnyefe nke redio n'ókè e kwukwara. N'ịbụ nke ọrụ nke isi obodo ahụ mere na 2011, e wuru Tokyo Skytree ma n'otu afọ ahụ, n'ihi ala ọma jijiji tsunami, antenna ahụ emegburu gbagọrọ agbagọ ma wepụ ya site na iweda elu nke ụlọ elu ahụ. 315 mita.
N’okpuru ụlọ elu ahụ enwere mini ụlọ ahịa na ụlọ ahịa na taa nwere a Otu Ibe pụrụ iche ihe ngosi, anime na manga a ma ama. Ọzọkwa Ọ na-adịkarị mma dị ka oge nke afọ na-Ee, na ekeresimesi o bu oriri. Igwe mbuli ahụ na-eburu gị mita 150, gaa na ebe a na-eche nche nke nwere ụlọ ahịa abụọ na ebe a na-echekwa ihe ncheta na tebụl ndị ahụ etinyere ike ka ha guzoro ma hụ ala n'ebe dị anya.
Enwekwara ihe ngosi na ihe ngosi nke otu obodo siri lee anya na mbu, n’uzo akuko nke di ala ma obu opekata mpe rue afọ a biri n’afọ 2016. N’afọ a enweghị m ike ịgaru n’ụlọ nche ndi ọzọ nke dị 250 mita n’ihi na emechiri ya na okpuru mmezi mana odi adi ma oburu na iga ma mepee echefu ya. Na ihe ọzọ, ekpebiri m ịghara ibuli igwe elu iji gbadata ma gbadata steepụ.
O juru oyi mana gwa m, ugboro ole na ndụ gị ka ị ga-eje ije na Tokyo Tower? Isi akwụkwọ nche na-emeghe site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere iri nke mgbede na nke pụrụ iche site na 9 nke ụtụtụ ruo elekere 10:9 nke abalị. Ọnụ ụzọ ahụ bụ yen 9, ihe dị ka dollar 30, na 820 maka ụlọ nche pụrụ iche. Ọ bụrụ na ịzụta tiketi agwakọtara ị na-akwụ 8 yen.
Gbago ụlọ atọ a toro ogologo ma ọ bụ ụlọ dị na Tokyo ị ga-enwe echiche ọzọ nke isi obodo Japan. Ahapụkwala n'ime igbe!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Sklọ elu kacha mma na Tokyo
Ebe 4 ị ga-aga na Portugal